Shikhar Samachar | मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य चलखेल बढ्यो : केन्द्रीय सदस्य डा. संग्रौला मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य चलखेल बढ्यो : केन्द्रीय सदस्य डा. संग्रौला
प्रकाशित मिती: २०७७ फाल्गुन ८
डोटी – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एबं विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य चलखेल बढेको बताइन् । नेपाल प्रेस युनियन डोटीले सिलगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य चलखेल बढेको कारण मुकाकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्बभौमिकता र स्वाधिनतामा गम्भीर असर परेको उनले बताइन् ।
केपी ओलीले खोक्रो राष्ट्रवाद र समृद्धिको टोपी लगाएर सुरु गरेको यात्रा बीचमै तुहिएको उनको भनाइ छ । शुखि नेपाली समृद्ध नेपाल नारा दुःखी नेपाली, अस्थिर नेपालमा परिणत भएको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य संग्रौलाले घर घरमा ग्यासको पाइप, पानि जहाज , रोजगारीको नारा झूटा साबित भएको बताइन् । दूर दराजका जनतालाई पानी जहाज रेल भन्दा शिक्षा , स्वास्थ्य र रोजगार आजको आबस्यकता भएको उनको भनाइ छ ।
पत्रकारको चुनाव सम्बन्धीको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरिन् । समय छोटो भएको र आबस्यक तयारी पनि नभएका कारण निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नहुने र याे हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै मात्र भएको बताइन् ।
कांग्रेस अदालतको निर्णयलाई हेरेर थप गतिविधि बढाउने बताउँदै उनले कांग्रेसले अदालतको निर्णयलाई मान्ने बताइन् ।